Radar Industrial Door China Manufacturers & Suppliers & Factory
Radar Industrial Door - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Radar Industrial Door)
Ụlọ ọrụ Radar Industrial Rolling High Speed ​​Door
Uru 1. Ihe kasị dịrị nchebe, nke kachasị mma, ụzọ kachasị mma ị ga-eji na-arụ ọrụ ụlọ ọrụ. 2.Dịpụtara maka mpụga eji eji ike ifufe. 3. A na-ewu ọnụ ụzọ anyị iji jide gị na ala mgbe ọ na-abịa n'ịrụ ọrụ azụmaahịa, ma anwalela ya n'emebughị ụzọ 8,000 kwa ụbọchị. Ihe kpatara nke a na-adabere na ntinye na ntinye...
Automatic elu na-agba stachi roller shutter door
High Speed stacking Door Isi Ọnụ ụzọ dị elu PVC na - emechi ọnụ ụzọ (na - emechi ọnụ ụzọ, ụzọ mkpuchi PVC na - emechi emechi, ụzọ na - agbanwe agbanwe), bụ ụdị ọnụ ụzọ eji arụ ụlọ ọrụ, aluminium, igwe anaghị agba nchara, igbe njikwa na sisite servo. Ọnụ ụzọ dị elu nwere ogologo ndụ ogologo oge karịa MILLION uasge, Ọ...
Doorlọ ọrụ PVC dị elu na-agba agba ọsọ
High Speed stacking Door Isi Na-achọ ụfọdụ ụzọ ọsọ PVC stacking door (na-emechi ọnụ ụzọ, PVC stacking door slide, door stacking door) to your factory, osisi, ụlọ ahịa ...? Ihe mkpuchi mkpọchi mkpọchi igwe anyị bụ nhọrọ zuru oke maka gị. Ngwa: * N'ime, n'èzí nke na-arịọ na-eguzogide ọgwụ ikuku...
Industrylọ ọrụ ọhụụ PVC Fabric High Speed ​​Door
Onwe-ndozigharị Nnukwu Oke Ọgba nke Anya PVC Zipper Door (Ọnụ ụzọ ndozi onwe ya, ọnụ ụzọ mgbake onwe ya, ọnụ ụzọ mgbake onwe ya) bụ ụdị ọnụ ụzọ akpaka anyị nwere, Na ndekọ azụmaahịa anyị, ihe nlere anya a mgbe niile na ahịa dị elu, mgbe ụfọdụ anyị na-akpọ ya ọnụ ụzọ ngwa ngwa, Enwere ike imeghe ọnụ ụzọ 1m / s. Ngwa: *...
Automatic Rapid Roll Up High Speed ​​Door
Onwe-ndozigharị Nnukwu Oke Ọgba nke Anya Ejiri PVC Zipper Door (Ọnụ ụzọ ndozi onwe ya, ọnụ ụzọ mgbake onwe ya, ọnụ ụzọ mgbake onwe ya) n'ọtụtụ mpaghara, Anyị na-erite uru site na ọnụ ụzọ ngwa ngwa mana anyị anaghị ahụkarị ịdị adị ya, ọnụ ụzọ Zipper dị elu na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị. Ngwa: *...
Door elu PVC onwe rụkwaa Elu
Autolọ Egwuregwu Auto Zipper High Speed ​​Door
Onwe-ndozigharị Nnukwu Oke Ọgba nke Anya Ọkpụkpọ PVC Zipper (Ọnụ ụzọ mmezi nke onwe ya, ọnụ ụzọ mgbakeghachi onwe ya, ọnụ ụzọ mgbake onwe ya), bụ ụdị ọnụ ụzọ eji arụ ụlọ ọrụ, aluminium, igwe anaghị agba nchara, igbe njikwa na sistem servo. Ọnụ ụzọ dị elu nwere ogologo ndụ ogologo oge karịa MILLION uasge, Ọ bụ nhọrọ...
Fabriclọ ọrụ mmebe akwa Zipper elu Speed ​​Door
Onwe-ndozigharị Nnukwu Oke Ọgba nke Anya PVC Zipper Door (Ọnụ ụzọ nrụzi onwe ya, ọnụ ụzọ mgbake onwe ya, ọnụ ụzọ mgbake onwe ya) ghọrọ ngwaọrụ dị mkpa na ụlọ ọrụ ugbu a. N'agbanyeghị ihe ị na-eme, kinddị ọrụ ị nyere, need chọrọ ọnụ ụzọ mkpọchi ụzọ iji mee ka ndị ahịa gị nwee ọmarịcha ahụmịhe. Ngwa: * N'ime,...
SGS Asambodo Zipper High Speed ​​Door
Onwe-ndozigharị Nnukwu Oke Ọgba nke Anya Dịka usoro iji meziwanye arụmọrụ nrụpụta, Turbine Hard High ọsọ na-atụgharị ọnụ ụzọ na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ kwa ụbọchị na-arụ ọrụ.Tainless steel Fast Rapid door nwetara ọtụtụ abaghị uru dịka, mepee / gbanyụọ ihe karịrị 1m / s, ogologo ndụ na-adịru ihe karịrị 1 MILLION ugboro...
Metal Geomagnetic Hard Speed ​​Speed ​​Turbine Door
Turbine Aluminom Ngwa ngwa ngwa na eburu uzo ulo A na-eji igwe eji agba ọsọ igwe na agba elu igwe n'ọtụtụ ebe, Anyị na-erite uru site na ọnụ ụzọ ngwa ngwa mana anaghị ahụkarị ịdị adị ya, ọnụ ụzọ Turbine High na-arụ ọrụ dị mkpa na ndụ anyị kwa ụbọchị. Ọnụ ụzọ dị elu na-enyere aka ịchekwa oge gị yana ego gị. Ngwa: *...
Turbine Hard Fast Rolling Up Door Dị elu
Turbine Aluminom Ngwa ngwa ngwa na eburu uzo ulo Aluminium uzo di elu na elu uzo di nma bu udiri uzo anyi nwere, N’edeputa ahia anyi, ihe nlere anya a bu mgbe nile n’ile ahia di elu, Mgbe ufodi anyi na akpo ya ngwa ngwa uzo, Enwere ike imeghe Onwe ya karie 1m / s. Ngwa: * N'ime, n'èzí nke na-arịọ na-eguzogide...
Aluminium Alloy Turbine Hard Fast Door
Turbine Aluminom Ngwa ngwa ngwa na eburu uzo ulo Ọnụ ụzọ ngwa ngwa Turbine siri ike bụ ụdị ihe eji emepụta ihe na-achọ ibuli usoro ị na-emepụta, bepụ oge na-enweghị oge na-adịghị mkpa. Ọ dị ezigbo mkpa na ọtụtụ ebe dị ka nnukwu ụlọ ahịa na nnukwu ụlọ ahịa ga-etinye ọnụ ụzọ ngwa ngwa, Ọ bụghị naanị maka ụlọ ọrụ. Ngwa:...
Automatic Split High Speed ​​Door
Turbine Aluminom Ngwa ngwa ngwa na eburu uzo ulo Bịa nweta ọnụ ụzọ ọsọ ọsọ gị maka azụmahịa gị! Igwe anaghị agba agba nke igwe anaghị agba ọsọ ọ bụghị naanị maka ndị nrụpụta kamakwa dabara na oge azụmaahịa ọ bụla dịka nnukwu ụlọ ahịa, ụlọ ahịa ahụike, Ọnụ ụzọ ebe ọ dị mkpa imepe / imechi ọtụtụ. Ngwa: * N'ime,...
SGS kwadoro Split Fast Roller Shutetr Door
Turbine Aluminom Ngwa ngwa ngwa na eburu uzo ulo Ihe anyị kwenyere bụ, arụmọrụ bụ ndụ, Oge bụ ego. Ọnụ ụzọ ike dị elu nke Turbine nwere ezigbo ngwọta maka igbu oge na mbufe, ibuga, mbupu, Bịaruo anyị nso ka anyị chọọ nke kacha mma dabara adaba azụmahịa gị! Ngwa: * N'ime, n'èzí nke na-arịọ na-eguzogide ọgwụ...
Metal Servo High Speed ​​Industry Door
Turbine Aluminom Ngwa ngwa ngwa na eburu uzo ulo Ọnụ ụzọ dị elu nwere ogologo ndụ ogologo oge karịa MILLION uasge, Ọ bụ nhọrọ zuru oke maka ebe a na-adọba ụgbọala, ụlọ nkwakọba ihe, nnukwu ụlọ… Ngwa: * N'ime, n'èzí nke na-arịọ na-eguzogide ọgwụ ikuku / okpomoku. * Industrylọ ọrụ dị egwu, ụlọ ọrụ ọkụ, ụlọ ọrụ...
Doorzọ mpịakọta na-agba agba na ọsọ ọsọ
Turbine Aluminom Ngwa ngwa ngwa na eburu uzo ulo Aluminium Ngwa ngwa Shutter na-aghọwanye ndị na-ewu ewu maka ndị na-emepụta na ndị ọrụ n'otu n'otu n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ngwa: * N'ime, n'èzí nke na-arịọ na-eguzogide ọgwụ ikuku / okpomoku. * Industrylọ ọrụ dị egwu, ụlọ ọrụ ọkụ, ụlọ ọrụ nri,...
Automatik High Speed ​​Rapid Roller Roller Garage Door
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Ọnụ ụzọ dị elu maka ime ụlọ oyi bụ usoro ụzọ, nke a na-ejikarị na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ha bụ nkwalite ọrụaka nke ụzọ amaara ama ama, ụzọ PVC akwa ma ọ bụ ndị na-emechi mkpọ. Isi ihe dị iche bụ na ihe owuwu na-adịgide adịgide na-enye ọsọ arụmọrụ dị elu ma ha na-enwe ike ịkwado ọnụọgụ dị...
Aluminom Alloy Rapid Roll Up Door emebere nke ọma
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Ọnụ ụzọ dị elu nke PVC dị mfe ịwụnye ma nwee ike itinye ya na kọntaktị, ọnụ ụzọ ọsọ ọsọ na-abụ ezigbo onye enyemaka maka azụmahịa gị. Ọnụ ụzọ dị elu maka ime ụlọ oyi bụ usoro ụzọ, nke a na-ejikarị na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ha bụ nkwalite ọrụaka nke ụzọ amaara ama ama, ụzọ PVC akwa ma ọ bụ...
Electric Industrial Fast Action Roller Door
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Enwere ike ịtinye ọnụ ụzọ a dị elu nke PVC nwere n'ime na n'èzí, ọnụ ụzọ ngwa ngwa nwere ike ịgbatị afọ 3 ma ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ awa 24 kwa ụbọchị. Ọnụ ụzọ dị elu maka ime ụlọ oyi bụ usoro ụzọ, nke a na-ejikarị na ngwa ụlọ ọrụ mmepụta ihe. Ha bụ nkwalite ọrụaka nke ụzọ amaara ama...
Industrial High Speed ​​Roller Shutter Door
Nchịkọta Ọsọ Ọsọ nke PVC Anyị nwere ọtụtụ agba mkpuchi maka nhọrọ gị, dịka odo, akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, ọbara ọbara ... Enwere ike itinye ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa uto ma nwee nnukwu obi ụtọ iguzogide ikuku, yabụ ọ dị mma ma ọ bụrụ na i tinye ya n’èzí. Ọnụ ụzọ dị elu...
Radar Industrial Door Rolling Industrial Door Roller Shutter Industrial Door PVC Roller Shutter Industrial Door High Speed Security Industrial Door Automatic Industrial Internal PVC Door Rapid Industrial Interal PVC Ụlọ Roller Shutter Door